Ucwaningo libika ukuthi bangama-63% abantu abake baba ne-Covid-19 eNingizimu Afrika | Scrolla Izindaba
Ucwaningo libika ukuthi bangama-63% abantu abake baba ne-Covid-19 eNingizimu Afrika
Sekudala kwabikwa ukuthi inani langempela labantu abatheleleke nge-Covid kungenzeka liphezulu kakhulu kunalelo aliqinisekisiwe.
Manje, imiphumela yocwaningo oluhlolisise abanikeli begazi abayizi-4,858 ikhombisa ukuthi iningi labantu abangama-63% baseNingizimu Afrika sebevele benayo i-Covid-19, kubika i-Sunday Times.
Imiphumela, eshicilelwe ngoLwesihlanu, iphinde ikhombise ukuthi abantu abamnyama kuleli baphethe izinga eliphezulu lokutheleleka ngokungeke kwalinganiswa nalelo labantu abamhlophe.
KwaZulu-Natali, enye yezindawo lapho kwenziwa khona lolu cwaningo, abantu abamnyama babesengozini yokutheleleka ngaleli gciwane ngokuphindwe kahlanu kunabamhlophe.
Ucwaningo beluholwa ngababhali be-National Blood Service (i-NBS), abebehlola izifundo zokuthola amasosha omzimba aleligciwane adala i-Covid-19.
La ma-antibodies asiza umzimba ukuthi udambise imiphumela yegciwane futhi sinawo kuphela uma ngabe sike sangenwa yilesi sifo phambilini.
Lolu cwaningo lwenziwa ezifundazweni ezine: e-Eastern Cape, e-Northern Cape, ​​e-Free State kanye naKwaZulu-Natali.
Yize kungu-2-3% kuphela walezi zifunda oye wahlola ukuthi une-Covid-19, ucwaningo lwe-NBS lukhombisa ukuthi phakathi kwamaphesenti angama-32 nangama-63% wabo bonke abantu sebethelelekile ngaleli gciwane.
Ucwaningo luphinde lwabonisa ukuthi yize wawungekho umehluko wangempela emazingeni okutheleleka phakathi kwabantu beminyaka eyehlukene nobulili obuhlukile, wawukhona umehluko ogqamile phakathi kwezinhlanga.
Abantu abaMnyama babenamathuba aphakathi kwaphindwe kathathu (e-Northern Cape) naphindwe kahlanu (KwaZulu-Natali) kunabantu abamhlophe ukuba nama-antibodies aleli gciwane.
“Ucwaningo lwethu lukhombisa ukwehluka okukhulu ekusabalaliseni kokutheleleka nge-SARS-CoV-2 phakathi kwamaqembu ehlukene obuhlanga, okungenzeka kuchazwe ngomehluko osuselwe emlandweni esimweni senhlalo-mnotho nezimo zezindlu,” kubhala abacwaningi.
Izwe libike ukuthelelana okusha okungaphezu kokuyizi-2,300 kwegciwane le-corona kanye nokushona okuhlobene ne-Covid okuyi-151 emahoreni angama-24 edlule.